Bandhigga tooska ah ee Calaamadaha & Xirxirida -Mexico & Vietnam
Bishii Diseembar, Shawei Label wuxuu qabtay laba bandhig oo khadka tooska ah ah oo loogu talagalay xirxirida Mexico iyo Calaamaynta Vietnam. Halkan waxaan inta badan ku soo bandhigeynaa agabyada wax lagu duubo ee DIY ee midabada leh iyo waraaqaha waraaqaha farshaxanka ah ee macaamilkayaga, waxaanna soo bandhigi doonaa qaabka daabacaadda iyo xirmooyinka, iyo sidoo kale shaqeynta. Show online wuxuu noo ogolaanayaa inaan la xiriirno ...
Qalabka Daabacaadda Cagaaran – 5M ballac PE Banner NON PVC 5M ballac, waxaa daabacan kara Eco-dareeraha, Xalka, UV, HP Latex Grams wuxuu noqon karaa 100g, 110g, 120g, 140g, 160g, 170g NON PVC, Dib loo cusboonaysiin karo, Xadhig la'aan
Waa maxay farqiga u dhexeeya shirkadaha naqshadeynta noocyada iyo wakaaladaha xayeysiinta?
Daabacaadda UV waa nooc ka mid ah daabacaadda dhijitaalka ah ee adeegsata laydhadhka 'violet-violet' si ay u qalajiso ama u bogsiiso khad sida ay u daabacan tahay. Maaddaama daabacaddu u qaybineyso khad dusha maaddada (oo loo yaqaan "substrate"), nalalka UV ee sida gaarka ah loo qaabeeyey ayaa la socda meel u dhow, daaweynaya - ama qalalaya - khadkii i ...
Waa maxay Daabacaadda UV?
Muhiimadda daabacaadda tayada leh ee ganacsiga
Daabacaaddu waxay noqotay mid si aad ah looga wada faa'iideysan karo dadweynaha guud sannadihii la soo dhaafay, iyadoo daabacaadda xitaa si toos ah uga suurta geli karto qaar ka mid ah taleefannada casriga ah. In kasta oo daabacaadda gurigu ay kufilan karto adeegsi shaqsiyeed, haddana waa ciyaar kubbadda kala duwan oo loogu talagalay dadka isticmaala adeegyada daabacaadda si ay ganacsigooda ugu suuq geeyaan. Basas ...